पूर्वका साठी लाख जनसंख्या लाई निरन्तर मुटुको सेवा दिँदै : डा माधब बिष्ट • Health News Nepal
डा. माधब बिष्ट, बरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ, बिराट मेडिकल टिचिङ हस्पिटल
अहिले पूर्वमा डा. माधब बिष्टलाई नचिन्ने मान्छेहरु बिरलै होलान। नेसनल हार्ट सेन्टर सिंगापुर बाट मुटु सम्बन्धि अध्ययन गरेर आएपछि केही समय नोबेल मेडिकल टिचिङ हस्पिटलमा सेवा दिनुभयो।
अहिले उहाँ बिराट मेडिकल टिचिङ हस्पिटलमा मुटु सम्बन्धि सेवा दिदै हुनुहुन्छ।
प्रदेश १ का १४ जिल्ला र प्रदेश २ का २ जिल्ला सिराहा र सप्तरीमा करिब साठी लाख जनसंख्या रहेको छ।
हेर्दा विदेशी जस्तो देखिने सालिन स्वभावका डाक्टरलाई नरुचाउने कोही पनि छैनन्।
हार्टअट्याक आउँदा खोलिने मुटुको बन्द रगतको नसा Angioplasty गर्नमा निकै नै सक्षम मानिन्छन्। यसै कारणले गर्दा पनि उहाँ यस क्षेत्रमा प्रख्यात छन्।
उनले यस अघि हजारौं बिरामीका Angioplasty गरिसकेका छन्। अहिलेको अवस्थामा हार्टअट्याक र कोरोना एकै साथ् पनि लाग्ने गरेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा जोखिम मोलेर भए पनि ज्यान जोगाउन Angioplasty गर्नुपर्ने हुन्छ।
Tags: Corona Virus #Covid19Dr.Madhav bistaHeart HealthNobel Hospital Biratnagar